> Resource> iTunes> 5 Mara mma Free iTunes Visualizers ka Download
iTunes visualizer nwere ike ghara ịbụ kwesịrị-nwere mma, ma ọ na-eweta ihe na-atọ ụtọ iTunes ọrụ. Ọ ga-adọrọ onye kensinammuo foto na ugbu a na-akpọ egwú, na ọ bụ n'ezie nnọọ jụụ na-ekiri mgbe ị na-ege ntị ụfọdụ iTunes songs. The wuru na-iTunes Visualizer na iTunes Omuma Visualizer dị ukwuu, na ugbu a ị nwere ike itinye ndị ọzọ fun site nbudata mmezi visualizers. Ebe a bụ ihe kacha mma iTunes visualizers nke anyị na-ahọrọ. Ahọtakwara gị ọkacha mmasị.
Ka na-amalite na-eji ire ụtọ na ngwa ngwa iTunes visualizer. Dị nnọọ ka ya aha "eruba" na-ekwu, edoghi ịkpali fluidly gafee ihuenyo, nke na-eme ya mesmerizing visualizer maka iTunes.
Pịa oyiyi n'elu ibudata iTunes visualizer. Ọzọkwa lelee 2 na-na-1 iTunes visualizer na lyric ọkpụkpọ.
Chepụta iTunes Visualizer
Nke a visual mmetụta maka iTunes amama gị music album cover n'ime 3D nlereanya na ihuenyo. Ọ bụ nnọọ nkà na-akpali na-ekiri. The song ọmụma bụ dịnụ. Na-acha ọcha ndabere ga-agbanwe ka nwa mgbe ịmafe ọzọ music track.
Dragọn ahụ iTunes Visualizer
Nke a visualizer bụ doro anya na yi. Ije nke dragọn ahụ nwere ịrịba njikọ na music. Ọ bụrụ na ndị tempo nke music bụ ngwa ngwa, ije nke dragọn ahụ ga-ngwa ngwa na ihe na-akpali anya na.
Download dragọn iTunes Visualizer
Isi-iyi Music Visualizer
Isi-iyi Music visualizer egosiputa a isi iyi nke ahụ nke ga-agbanwe ya na agba dabere na music.
Download Iyi Music Visualizer
Nke a bụ otu nke ọkacha mmasị m anya anya maka iTunes. Ọ bụ a 3D mmanya sere n'elu na ná mpụta ohere, na a cubic album cover. The mmanya uche ghọrọ ogologo ma ọ bụ mkpumkpu, na agba ga-agbanwe, na-adabere song.
Ọzọ iTunes Visualizers
Nke niile dị n'elu iTunes visualizers bụ free nke na-abụghị azụmahịa were. E bụ na-emekarị ntụziaka iji wụnye ha, ma ọ bụ nanị a ngwugwu wepụ na iji. Ị mkpa họrọ arụnyere visualizer site View> Visualizer na iTunes. Maka azụmahịa iTunes visualizers, Soundspectrum enye ọkachamara na-eju ndị maka iTunes nakwa dị ka ndị ọzọ na mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka Windows Media Player, Winamp, MediaMonkey, wdg m na-emekarị na-eji free ikpe version. Bravo!